के लेखिन् साम्राज्ञीले गोप्य अंगमा यस्तो ? | Emedia Hub UK
Home Entertainment के लेखिन् साम्राज्ञीले गोप्य अंगमा यस्तो ?
काठमाडौं – अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह अहिले चलचित्र ‘कायरा’ सुटिङका लागि फिलिपिन्समा छिन् । आर्यन सिग्देलले निर्माण गरेको यो चलचित्रका लागि उनले अहिले सम्मकै महँगो पारिश्रमिक लिएकी चर्चा छ । चलचित्रमा उनको अभिनेता आर्यनसँगै रोमान्स रहेको बुझिन्छ भने अभिनेत्री साम्राज्ञीको भर्खरै छायाँकन स्थलबाटै एक नयाँ तस्बिर सार्वजनिक भएको चर्चा गरिएको छ ।
जुन तस्बिर अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल भएको छ । तस्विर उनले गोप्य अंग नजिक टाटु लेखाएकी छन् ।
साम्राज्ञीले तस्बिर इष्टाग्राम मार्फत सार्वजनिक गरेकी हुन् । तस्बिर भाइरल भए लगतै उनले हटाएकी छन् । ट्याटुमा केहि कुरा लेखिएको देख्न सकिन्छ । तर लेखिएको कुरा के थियो भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्ने खालको छ ।
केही दिन पहिले अभिनेता आर्यनले पनि घाटीमा गितारको ट्याटु भएको तस्बिर सार्वजनिक गरेका थिए ।
सो ट्याटुले उनी चलचित्रमा सांगीतिक क्षेत्रमा लागेको एक कलाकारको भुमिकामा छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
लक्ष्मण रिजालको निर्देशन रहेको यो चलचित्रको पुरै छायाँकन फिलिपिन्समा हुने बताइएको छ ।
यस्तो छ साम्राज्ञीको केहि समय अगाडिको चर्चित तस्विरहरु..
जव एक किस सिनका लागि राखिले दिइन् ५५ किस…